राेचक संसार Archives - Page4of 19 - krishipost.com
काठमाडौं । मान्छेले खाने तरकारी यतिसम्म महँगो हुन्छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो तरकारी छ, जसको मूल्य एक किलोकै झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ पर्दछ । सोही कारण यो तरकारी विश्वकै सबैभन्दा महँगो तरकारी बनेको छ ।...
अमेरिकी किसान हरु गाईको पेटमा प्वाल पार्नुको बास्तबिक कारण यस्तो रैछ
एजेन्सी । उत्तर अमेरिकी मुलुक क्यानडा क्षेत्रफलको हिसाबको संसारको दोश्रो ठूलो देश हुनुका साथै संसारको विकसित मुलुकहरुमा एक हो । अमेरिकासँगको क्यानडाको सीमाना संसारको सबैभन्दा लामो भू-सिमानाको रुपमा रहेको छ जसको लम्बाई ८ हजार किलोमिटरभन्दा धेरै छ । यो भिमकाय मुलुकको ४० प्रतिशत भाग...
काठमाडौं । जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ । नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो । यसैले हामी आज हाम्रा भीर पाखाबाट कसरी आम्दानी गर्न सक्छौ भन्ने जानकारी दिँदैछौ । अर्गानिक वल्र्ड प्रा।लीले...
यो हो विश्वकै महंगो आँप , जसको स्वाद चाख्न मात्र तीन लाख तिर्नुपर्ने ?
एजेन्सी – अहिले गाउँघरमा आँप फलिरहेको छ, किनकी यो बेला आँपको सिजन हो । खाँदा निकै मिठो हुने आँप धेरैलाई मनपर्छ । तपाईलाई अचम्म लाग्ला, विश्वकै सबैभन्दा महंगो आँपको स्वाद चाख्न ३ लाख खर्च गर्नुपर्दछ । विश्वकै सबैभन्दा महंगो त्यो आँप जापानमा रहेको छ...
कहाँ पाइन्छ रातो रंगको केरा ? यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौं – प्रकृतिले हामिलाई धेरै अनौठा चिजहरु दिएको छ । ती सबै चिजहरु बारे हामिलाई थाहा पनि हुँदैन । हामिले केरा देखेकै छौ र खाएका पनि छौ । केराको रंग हरियो र पहेलो हुने गर्छ । तर के तपाईले रातो रंगको केरा देख्नु भएको...
काठमाण्डौंः प्राचीन समयदेखि नै पहिला अण्डा आयो कि कुखुरा भनें विषयमा विभिन्न प्रकारको बहस सुरु हुँदै आएपनि कसैको एकमत भने थिएन । पहिला कुखुरा आएको वा अण्डा पहिला आएको सवालले वैज्ञानिक तथा दर्शनशास्त्रीहरूको अहिलेसम्म पनि दिमाग चलाईरहेको छ । अण्डा पहिला आयो भने अण्डा...
एउटै आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएपछि…
काठमाण्डौंः एक आइरिस सेलिब्रेटी फोटोग्राफरले आइरिस आलूको फोटो १२ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । केबिन एबोसले आफूले अर्गानिक आलूको फोटो एक अज्ञात युरोपेली व्यवसायीलाई बिक्री गरेको पुष्टि गरेका हुन् । उक्त फोटो २०१० मा खिचिएको थियो । त्यसको पोर्टफोलियो सटिबन सपिलबर्ग, माइलक पेलिन,...
काठमाडौँ । करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो। तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैनः गर्भवती हुनुहुन्छ ? करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ । बढी करेलाको सेवनले गर्भ तुहिनेसमेत...